သင်္ကြန်ကာလတွင် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ်ဌာန၌ ဝန်ထမ်းအင်အား နှစ်ဆခန့် တိုးမြှင့်ချထ? - Yangon Media Group
သင်္ကြန်ကာလတွင် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ်ဌာန၌ ဝန်ထမ်းအင်အား နှစ်ဆခန့် တိုးမြှင့်ချထ?
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၈ – သင်္ကြန်ကာလ တွင် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး အ ရေးပေါ်ဌာန၌ ဝန်ထမ်းအင်အား နှစ်ဆနီးပါး တိုးမြှင့်ချထားမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ဧပြီ ၈ ရက် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးတွင်ပြုလုပ်သော သတင်း စာရှင်းလင်းပွဲတွင် ရန်ကုန်ပြည် သူ့ဆေးရုံကြီး ဆေးရုံအုပ် ဒေါက် တာခင်သိင်္ဂီမြင့်က အထက်ပါအ တိုင်းပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“”ပုံမှန်အခြေအနေမှာဆိုရင် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးရဲ့ အရေး ပေါ်ကုသဌာနမှာ ဝန်ထမ်းဦးရေ က ၈၀ နဲ့ ၁၀ဝ ကြား တာဝန်ထမ်း ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။ အခု သင်္ကြန်ကာလဆိုရင်တော့ တခြား ပိတ်ထားတဲ့ ဌာနကဝန်ထမ်းတွေ နဲ့ပူးပေါင်းလိုက်ပြီး ဝန်ထမ်းဦးရေ ကို ၁၅၀ နဲ့ ၂၀ဝ ကြားကို အကြို နေ့ကနေ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ထိ တိုးမြှင့်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်”” ၄င်းကပြောသည်။
ဝန်ထမ်းများတိုးမြှင့်ချထားသကဲ့သို့ ဆေးဝါးပစ္စည်း ကိရိယာ များကိုလည်း လူနာ ၃၀ဝနှင့် ၅၀ဝ နီးပါးအတွက် အဆင်သင့်သိုလှောင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ၎င်းင်းကဆိုသည်။
ယင်းအပြင် သင်္ကြန်ကာလမတိုင်မီကပင် အရေးပေါ်အခြေအ နေဖြင့် ရောက်ရှိလာမည့်လူနာများအတွက် ဆေးရုံအုပ်များ၊ အရေး ပေါ်ဌာနမှ ပါမောက္ခဆရာဝန်ကြီးများ၊ ဆရာဝန်နှင့်သူနာပြုများ၊ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် ဓာတ်မှန်ခန်းတာဝန်ရှိသူများ၊ ဧည့်ကြိုနှင့် အောက်ခြေဝန် ထမ်းအကုန် ပူးပေါင်းကာ ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်မှုများလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဆေးရုံအုပ်ကပြောသည်။သင်္ကြန်တွင် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ ဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိခဲ့သော လူနာအများစုမှာ ယာဉ်မတော်တဆမှု များဖြစ်ကာ ဒုတိယအများဆုံးမှာ အချင်းချင်းခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားမှု ကြောင့် ရောက်ရှိလာသူများဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ်ဌာန သို့ရောက်ရှိခဲ့သော လူနာမှာ ၈၃၀ ဦးဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၈၉၁ ဦးဖြစ်သည်။
“”ယာဉ်တိုက်မှုအန္တရာယ်နဲ့ ရောက်လာတဲ့လူနာဦးရေလျော့ လာတယ်။ ခိုက်ရန်ကြောင့်ရောက် လာတဲ့လူနာလေးတွေလည်း လျော့လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်ဟာများ သွားသလဲဆိုတော့ သေဆုံးပြီး အသက်မပါဘဲ ရောက်လာလူနာက ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ရှစ်ဦးရှိတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာတော့ သေဆုံးပြီးမှ သက်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရောက်ရှိလာ တဲ့သူက ၁၈ ဦးအထိရှိတယ်””ဟု ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ဆေးရုံ အုပ်ဒေါက်တာခင်သိင်္ဂီမြင့်က ပြောသည်။
ယင်းသို့သေဆုံးပြီးမှ ရောက် ရှိလာသောသူများသည် များသော အားဖြင့်ဆိုင်ကယ်မတော်တဆမှု ကြောင့်ဖြစ်ကာဆေးရုံနှင့်ဝေးလံ သောနေရာများမှဖြစ်ကြောင်း သိ ရသည်။
ဒုတိယမြို့တော်ဝန် ဦးစိုးလွင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ရထားသံလမ်း ကျိုးပြတ်နေသည်ကို စက်ခေါင်းမောင်း ကြိုတင်တွေ့မြင်ခဲ့မှုကြောင့် နဘား-ကသာ မီးရထာ??
တပ်မတော်၏ အပစ်ရပ်ကြေညာချက်ကို ထောက်ခံကြောင်း လူအင်အားထောင်ချီ ဆန္ဒထုတ်ဖော်
တောင်ကြီးတွင် ဒီဇယ်ကန်လှယ်ရာမှ စက်သုံးဆီဆိုင်မီးလောင်